Tsy feon-dRavalomanana ilay antso teny amin'ny Auditorium?
2009-05-26 @ 22:32 in Politika
Resaka roa samihafa no lazaina fa nataon'ny filoha Ravalomanana ny andron'ny alarobia 26 mey 2009. Ny voalohany dia nalefan'ny radio fahazavana ny maraina, mazava tsara ilay feo fa tena ny filoha Ravalomanana. Ny faharoa kosa dia ny resaka nandritra ny fihaonan'ny mpandala ny ara-dalàna teny amin'ny Auditorium Ankorondrano ny atoandro fa nampisalasala ahy tanteraka ilay feo. Tsy matoky io faharoa io aho saingy avoakoako ihany aloha :
Ny kabary ny maraina tao amin'ny radio fahazavana
Ry vahoaka malagasy tia tanindrazana ary mitaky sy miady ny famerenana ny ara-dalàna, miarahaba anareo aho.
Ankehitriny i Madagasikara dia tarihin'ireo antokon-jiolahy manana tetika maizina sy miafina, tarihan’i Andry Rajoelina ary tohanan’ny frantsay sy ny firongony. Ny tanjon’izy ireo dia hanjanaka indray an’i Madagasikara, ary ny hanandevozana ny Vahoaka malagasy. Ny tetika feno fitaka vaovao ataon'ny frantsay amin'izao fotoana izao mba ialana amin’io savorovoro naterany, dia ny fampiharana ny fifanarahana vaovao ataony amin’i Andry Rajoelina sy ireo jiolahy manohana azy. Ny zavatra kendren’izy ireo dia ny hisian’ny adim-poko eto amin'ny firenentsika.
Ny mpitondra an’i Madagasikara ankehitriny dia saribakolin’ny frantsay. Miasa miaraka akaiky amin’ny frantsay izy ireo, ka ampiasainy ny fomba rehetra. Tafiditra ao anatin’izany ny fampihorohoroana, ny fanenjehana, ny fanagadrana, ny famonoana ny vahoaka malagasy izay hita fa mijoro sy sahy mitaky ny ara-dalàna amin'ny ra-dalàna mba hahafahan’izy ireo mifikitra eo amin’ny fitondrana izay tarihiny. Mihevitra izy ireo fa izany fihetsika sy herisetra, fahefana izany no manome zo azy handika lalàna. Tsy izany velively anefa ny safidin’ny Vahoaka malagasy.
Tsy tian’ny frantsay handroso mihitsy i Madagasikara. Izy ihany no tiany hahazo tombotsoa. Avelany hanapotika ny fotodrafitrasa sy hanimba ny fananan'ny olona ireo olona baikony sy karamainy ireo mba tsy hampandrosoana an’I Madagasikara tsy hampivoatra ny fari-piainan’ny Vahoaka malagasy. Ireo andian-jiolahy tarihan’I rajoelina dia tsy manam-pikasana hafa, afa-tsy ny hanapotika ny fandrosoan’ny toe-karena Malagasy amin’izay dia mahantra ny Vahoaka Malagasy.Hahatongavany amin’izany dia efa notafihany ireo fananam-panjakana sy ny fananan’olon-tsotra toy ny fangalana vola tao amin’ny Banky Foibe, tao amin'ny “Assurances”, izay fananan’ny firenena Malagasy.
Amin’izao fotoana izao dia miezaka i Andry Rajoelina, ampian’ny frantsay, handresy lahatra ny firenena miteny frantsay rehetra. Ny tanjon’izy ireo dia mba hahazony ny fankatoavana sy ny fanohanan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena, amin’ny fandikan-dalàna izay ataony. Ry vahoaka malagasy tia tanindrazana, manana fahasahiana sy mijoro manohana ny ara-dalàna, hanao izay tratry ny heriko aho,ary hampiasa fahefako sy ny fahaizako handrodanana haingana io fanjakan’ny baroa tarihin’I Andry Rajoelina sy ny mpanara-dia azy io mba hamerenana indray ny ara-dalàna eto amin’ny tany sy ny Fanjakana. Hahatongavana amin’izany anefa dia tsy maintsy nitety ireo firenena maro, nanazava ary nangataka fanampiana. Nanaiky daholo ireo firenena ireo hanampy antsika. Ho hambarako aminareo atsy ho atsy ny mikasika izany. Koa ambarao amin’ny Malagasy mpiray tanindrazana amintsika izao resaka ataoko aminareo izao. Ary mahereza fa mahatsiaro anareo mandrakariva am-bavaka aho.
Momba antsika mandrakariva Andriamanitra!
Ny antso nandritra ny fihaonana teny amin'ny Auditorium
Ny antso nandritra ny fihaonana teny amin'ny Auditorium kosa dia ilay kabary mampisalasala, satria badalela izany ilay feo, kentsokentsona ary misy fiangolam-piteny tsy fantatro ho avy aminy velively. Enga anie mba ho fanafainganana oronam-peo no nahatonga ny fiovam-peo tsapako satria tahaka ny haingam-piteny loatra ilay olona no niteny nefa tsy tezitra (Tsoriko aloha fa feon'i Raharinaivo Andrianatoandro kokoa no fahenoako ity kabary ity fa tsy an-dRavalomanana velively), mampisalasala ihany koa ny fiatoam-piteniny, Misy ihany anefa ny marika toa ilazana fa izy no miteny. Indro ampitaiko ihany na dia izany aza:
Miarahaba anareo vahoaka marobe tonga eto amin'ity toerana ity aho. Manahoana daholo ianareo e!
Mahatsiaro aho ary mankasitraka mandrakariva ny fitiavana ao anatinareo ao, ny fandaminanareo rehetra... izay hihaonantsika tsy ho ela, minoa ahy ianareo fa tsy maintsy hotanterahintsika izany. Mahatoky aho, mahatoky aho fa mahalala ny tokony ataony ny vahoaka Malagasy ary ho saro-piaro amin'ny fitiavan-tanindrazana ka dia enga anie izao fihetsika ataontsika rehetra izao, izao fikarohana vahaolana izao mba ho tanteraka hatramin'ny farany ary tsy matahotra isika satria momba antsika Andriamanitra. Ny zavatra anakiray tokony homarihina sy ampahafantarina anareo dia izao: Tsy hamelantsika mihitsy raha tsy miverina amin'ny laoniny ny filaminana ary ny lalampanorenana tsy maintsy hajaina toy ny anakandriamaso ary indrindra indrindra ny tany tan-dalàna.
Ary Mampahahelo dia mampalahelo ny mahita ny fijalian'ny vahoaka malagasy ankehitriny; miafina, mandositra, tsy mba manana izany zo maha-olona azy izany. Tena mangirifiry ny fiainana ankehitriny ka hoy aho ry vahoaka malagasy : Samia manao araka izay azo atao mba hiarovana ny ara-dalàna. Ny zavatra tiako ampitaina farany : Aoka mba samby hitovy ny fomba fijerintsika ary hiara-hientana isika handresy an'izao hetsika sy fandrobana ataon'ny sasany izao, fandrobam-pahefana, ary indrindra indrindra ny fiadiavan'ny sasany hanasarahana iindray ny firenentsika, tsy manaiky an'izany mihitsy isika Malagasy, tsy manaiky an'izany isika.
Ny hafatra tiako apetraka aminareo ary dia samia, samia hoy aho aminareo manana ilay faharetana sy ilay finiavana manao zavatra. Satria izay ihany no ahafahantsika manatanteraka ireo ilay finoana ananantsika, indrindra indrindra ny fijoroantsika, ny fitiavana, izany entanin'ny fitiavana izany dia mahavita zavatra.
Izao hetsika ataonareo izao dia (...) amin'ny firenen-drehetra, ary miara-miasa amintsika ny firenen-drehetra dia mba manohana, ny firenena izay(?) toy ny firenena afrikana, ny eoropeana, ny aziatika manohana antsika avokoa, koa matokisa fa tsy maintsy hanampy antsika izy ireo. Holazaiko amainareo atsy ho atsy ny vokatr'izany fiaraha-miasa izany ka dia manantena isika, mino isika fa momba antsika Andriamanitra.
Mandrapihaona indray ary ry vahoaka Malagasy!
Hatreo ilay antso, rehefa mihaino aho dia tahaka ny mieritrritra fa misy tenin-dRaalomanana atsofotsofoka any anatiny any ka any amin'ny fehezanteny mampiahiahy mihitsy ny feony no toa misy fampirisihana ankolaka ny hoe tsy maninona ny mifampidinika toy ilay teny manao hoe "enga anie izao fihetsika ataontsika rehetra izao, izao fikarohana vahaolana izao mba ho tanteraka hatramin'ny farany ary tsy matahotra isika satria momba antsika Andriamanitra." Miharihary anefa fa ny tanjona tokan'ity fifampidinihana eny amin'ny Carlton amin'izao fotoana izao ity dia ny hampaneken'ny Firenena ivelany ny fitondran'ny mpanongam-panjakana. Izay no fahitako azy. Azo atao ihany koa ny maka ny antsipiriany toy ny hoe "miara-miasa" tsy fitenin-dRavalomanana fa miasa miaraka no fiteniny.
Amiko : Namadika ny tolona ny mpitarika ny mpandala ny ara-dalàna teto an-toerana.
Fa na izany na tsy izany dia tsy ekeko mihitsy ny dinika ataon-dry zalahy milaza ho misolo tena an-dRavalomanana amin'izao fotoana izao. Raha ny hitako tamin'ny fahitalavitra dia nolazainy fa resaka momba ny famotsora-keloka mihitsy no hfampidnihana. Ny mivoaka amin'ny vaovao anefa avy eo dia vita ny fizaran-tseza eo amin'ny efa-tonta nifampidinika. Hatreto dia tsy hita akory ny resaka fanafahana ireo mpitolona mpandala ny ara-dalàna nalaina an-keriny rehetra. Tsy tezitra tahaka ny talata 26 mey 2009 indray aho satria maika ny hifampizara seza no hitako ataon-dry zalahy rehetra tao. Raha izaho manokana dia tsy manaiky izay famadihana nataon'ny solontenan'ny mpandala ny ara-dalàna izao aho. Tsy maintsy lazaina isan'andro ve izy ireo fa tsy ilaina ny fifampidinihana amin'izao endriny izao? Ny hitako ihany koa dia maro amin'ny mpanaraka azy (izay nijery tvplus) no tezitra tamin'izay nilaza ho solontenan'ny fironana notohanany avy. Samy miteny avokoa moa ny rehetra fa tsy fitiavan-tanindrazana mihitsy no taratra tao fa fitiavan-tseza mibaribary! Efa mba nampitandrina ihany ny tena fa tsy noraharahiana!
Na izany aza mahavelombolo ny mahita fa mety hihetsika hanohitra ny fahatongavan'i Dada eto Madagasikara ny tarik'i Alain Ramaroson amin'ny Sabotsy ho avy izao. Mahaelombolo satria hampiakatra ny hafanampon'ny mpadala ny ara-dalàna samy haneho ny hamaroany fa enga anie tsy hihaona na ho tafahoana an-dalana kosa. Raha izaho, tsy mampaninona ny mifanena amin'izy ireo fa tsy tsy fahazakana ny hevitry ny hafa mankamin'ny fanaovana herisetra eo amin'ny samy sivily kosa no tsy laitra. Mahavelombolo satria ny mpikambana ao amin'ny HAT ihany koa izany no hanatontosa hetsika politika izay raràn'ny ao amin'ny FAT amin'izao fotoana izao. Efa fahitana fikoropahana eo amin-dryzareo ihany izany aloha amiko. Na izany aza, ny hatao amin'ireto mpitarika ny tolona namadika ireto no mety tsy hahitako tory amin'ity alina ity nefa efa miverina any Babylona tsy mahalala andro fialan-tsasatra indray ny tena amin'izao fotoana izao.
jentilisa, 27 mey 2009 amin'ny 00:33